Siyi-blog enikezelwe ezindabeni zokubhala nasezindabeni zokuhlela. Siyathanda ukungena kubabhali bakudala futhi sixoxisane nabalobi abakhethwe kakhulu njengabo UDolores Redondo o UMarwan futhi ukuhlalisa ababhali abasha.
Sinabalandeli abangaphezu kuka-450.000 be-Twitter ku-akhawunti yethu @NomzamoMbatha Kusuka kuphi
Sithanda ukudlula emicimbini eyahlukene. Kusukela ngo-2015 besihamba phakathi kwabanye siye kokuhlonishwayo Umklomelo Weplanethi futhi sizokutshela ngakho bukhoma futhi uzibonele mathupha.
Ithimba lokuhlela le-Actualidad Literatura lakhiwa iqembu le- ongoti bezincwadi, ababhali nababhali abaklonyeliswe ngemiklomelo ehlukene. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
UMariola Diaz-Cano Arevalo
Kusukela ekuvunweni kweManchega kwabangama-70, ngiphume njengomfundi, umbhali nomlingisi wefilimu. Ngibe sengiqala ukufunda ifilology yesiNgisi, ngifundisa futhi ngihumusha kancane ulimi lwesiSaxon. Ngagcina ngiziqeqeshela ukufundela ukubhala isipelingi kanye nesitayela kubashicileli, ababhali abazimele nabasebenza kwezokuxhumana. Ngiphethe amawebhusayithi amabili: iMDCA - CORRECCIONES (https://mdcacorrecciones.jimdofree.com/) neMDCA - FUNDA ISINGISI NESPANISHI (https: //mdca-aprende-a-tu-aire-ingles-y-espanol.jimdosite. com /). Nginayo newebhusayithi yokubhala, iMDCA - INOVELAS Y RELATOS https://mdcanovelasyrelatos.jimdofree.com/) kanye ne-blog, MDCA - QUÉ HAY DE LO MÍO (https://marioladiazcanoarevalo.blogspot.com.es/), lapho Ngibhala ngezincwadi, umculo, uchungechunge lwethelevishini, izindaba zamabhayisikobho nezamasiko jikelele. Ngolwazi lokuhlela nokuhlela, ngizishicilele amanoveli amahlanu: "Marie", umlando omathathu "Izimpisi nenkanyezi" kanye no "Ngo-Ephreli".
IBachelor of Education, yisho ulimi nezincwadi, ezivela e-Udone (Universidad de Oriente, Nucleo Nueva Esparta, Venezuela). Uprofesa waseYunivesithi ezihlalweni zomlando, izincwadi zaseSpain naseLatin American, kanye nomculo (ukuvumelana nokudlala isiginci) IBachelor of Education, yisho ulimi nezincwadi, (Udone). Uprofesa waseNyuvesi wezincwadi, umlando nomculo. Ngisebenza njengombhali, ngigqame ezinkondlweni nasezindabeni zasemadolobheni. Ezinye zezincwadi zami yilezi: "iTranseúnte", izindaba; "Imizimba ogwini", ukuqoqwa kwezinkondlo. Ngisebenza futhi njengomdali wokuqukethwe nesihleli sombhalo.
Umhleli nombhali kusukela ngo-2007. Umthandi wencwadi kusukela ngo-1981. Kusukela ngisemncane bengingumshwabadeli wezincwadi. Lowo ongenze ngabakhonza? UNutcracker neNkosi yamaGundane. Manje, ngaphezu kokuba ngumfundi, ngingumbhali wezindaba zezingane, ezentsha, ezothando, zokulandisa nezothando. Ungangithola njengo-Encarni Arcoya noma uKayla Leiz.
U-Ana Lena Rivera Muñiz
Ngingu-Ana Lena Rivera, umbhali wochungechunge lwenoveli olubamba iqhaza likaGracia San Sebastián. Icala lokuqala likaGracia, Lo que Callan los Muertos, lithole iTorrente Ballester Award 2017 nomklomelo wokugcina weFernando Lara Award 2017. Bengizifela ngezindaba eziqanjiwe zobugebengu kusukela ebuntwaneni, ngenkathi ngishiya uMortadelo noFayilemón benoPoirot noMiss. Marple, ngakho-ke ngemuva kweminyaka eminingana njengomphathi ezweni elikhulu lezizwe eziningi ngashintsha ibhizinisi ngothando lwami olukhulu: Inoveli yobugebengu. Ngakho-ke kwazalwa uGracia San Sebastián, umcwaningi oholayo ochungechungeni lwami lwenoveli yabaphenyi, lapho abantu abajwayelekile, njenganoma ubani wethu, bangaba yizigebengu, baze babulale nalapho impilo ibafaka esimweni esinzima. Ngazalelwa e-Asturias, ngineziqu kwezomthetho nakwezokuphatha ibhizinisi nokuphathwa futhi ngihlale eMadrid kusukela ezinsukwini zami zaseyunivesithi. Ngezikhathi ezithile ngidinga ukuzwa iphunga lolwandle, uLwandle lwaseCantabrian, oluqinile, oludlamkileyo noluyingozi, njengamanoveli engikubhalela wona.
Umphikisi onjengabaningi, umqaphi wezemfundo futhi enezinto zokuzilibazisa eziningi, kufaka phakathi ukufunda. Ngiyayithanda i-classic enhle kepha angivaleli ebhendi lapho okuthile okusha ezincwadini kuwela ezandleni zami. Ngiyayithokozela induduzo nokukhululeka 'kwama-ebook' kepha ngingomunye walabo abathanda ukufunda ngokuzizwa iphepha, njengoba bekwenziwa njalo.
Umbhali wezokuvakasha nezincwadi, umthandi wezinhlamvu ezingaziwa. Njengombhali wezinganekwane, ngishicilele izindaba eziwina imiklomelo eSpain, ePeru naseJapan nencwadi ethi Cuentos de las Tierras Calidas.
Unjiniyela nomthandi wezindaba. Indlela yami ezincwadini iqale nge "The Circle of Fire" kaMariane Curley futhi yahlanganiswa ne "Toxina" kaRobin Cook. Nginombono wephupho, kungaba yi-Young Adult noma umuntu omdala. Ngakolunye uhlangothi, ngithanda nokujabulela uchungechunge oluhle, i-movie noma i-manga. Noma yini ephethe indaba nayo yamukelekile. Ngingumphathi webhulogi yokubhala lapho ngibhala khona umbono wami ngezincwadi engizifundile: http://librosdelcielo.blogspot.com/
Iziqu ze-Hispanic Philology. Ngikukhathalele ukubhala, ngenza i-Master in Narrative and Creative Writing. Kusukela ngisemncane kakhulu bengizithanda izincwadi, ngakho-ke kule bhulogi ungathola izeluleko ezinhle kakhulu zokubhala inoveli, noma ujabulele ukubuyekezwa okuhle kwezincwadi zakudala.
Ngazalelwa eBarcelona ngenyanga yokugcina yama-80s.Ngaphothula izifundo zePedagogy e-UNED, ngenza imfundo indlela yami yokuphila efanele. Ngasikhathi sinye, ngizithatha njengesazi-mlando "se-amateur", esikhathazekile ngokufunda okwedlule futhi ikakhulukazi izingxabano zesintu ezifana nezimpi. I-Hobby, lena, engiyihlanganisa nokufunda, ukuqoqa izincwadi zazo zonke izinhlobo futhi, ngokujwayelekile, nezincwadi ezikuwo wonke amathuba azo. Ngokuqondene nokuzilibazisa kwami ​​kwezemibhalo, kufanele ngisho ukuthi incwadi engiyithandayo kakhulu yi- "The Godfather" kaMario Puzzo, isaga engilithandayo kakhulu elikaSantiago Posteguillo elizinikele kumaPunic Wars, umbhali wami oyinhloko ngu-Arturo Pérez-Reverte nesithenjwa sami emibhalweni nguDon Francisco Gomez de Quevedo.
Ngazalwa ngosuku olufanayo noPrince Henry waseNgilandi. Uyinkosana yaseNgilandi futhi ngingumtapo wolwazi. Ngiyabonga Karma. (ngaphandle kwe-acrimony).